ओलीले माधब नेपाललाई भने: एकता मात्र हुन दिनुस्, महाधिवेशनमा अध्यक्ष तपाई नै हो’ » खबरहरुको एउटै केन्द्र
ओलीले माधब नेपाललाई भने: एकता मात्र हुन दिनुस्, महाधिवेशनमा अध्यक्ष तपाई नै हो’
मंगलवार, बैशाख ४, २०७५ १२:०७ मा प्रकाशित !
काठमाडौं, ४ वैशाख । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच दुई अध्यक्षबीच बराबरी हैसियतमा जिम्मेवारी लिने सहमति भयो । त्यही सहमति अनुसार नै असोज १७ गते गरिएको सहमतिमा ओली र प्रचण्ड एकता संयोजन समितिको मूख्य नेतामा राखियो ।
ओली र प्रचण्डबीच भएको सहमतिमा प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षमा अढाई वर्षका दरले आलोपालो गर्ने सहमति थियो । त्यही सहमतिअनुसार फागुन ३ गते ओली प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए ।
सहमति अनुसार ओली प्रधानमन्त्री र सेरोमोनियल अध्यक्ष हुने, प्रचण्ड कार्यकारी अध्यक्ष हुने र महाधिवेशनबाट प्रचण्डलाई पार्टी अध्यक्ष बनाउन दुवै पार्टीका नेताहरु मञ्जुर भएका थिए ।
एक वर्षभित्र एकता महाधिवेशन गरेर सहमतिमै प्रचण्डलाई पार्टी अध्यक्ष बनाउने सहमति भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीको दोहोरो भूमिकाले यतिबेला प्रचण्ड सशंकित छन् ।
स्रोतका अनुसार पार्टी एकताको प्रारम्भिक सैद्धान्तिक आधारको सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुअघि एमाले बरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले ‘तपाईहरुको मात्र व्यवस्थापन भएर हुन्छ, हाम्रो हुनु पर्दैन’ भनेर प्रश्न गरेका थिए । त्यसपछि ओली र माधव नेपालबीच करीब ४ घण्टा वान टु वान बार्ता भएको थियो ।
बार्तामा ओलीले ‘अहिले एकता गरि हाल्यौं, एकतापछि तपाई हामी छँदै छौं नि । एकता मात्र हुन दिनुस्, महाधिवेशनमा अध्यक्ष तपाई नै हो’ भनेको माधव नेपालनिकट नेताहरुले अनौपचारिक कुराकानीमा भन्ने गरेका छन् ।
ओली र नेपालको सहमतिअनुसार नै एमालेभित्र विवाद समाधान भएको र माधव नेपाल नै छिटै एकता गरौं भन्दै प्रचण्डलाई दवाव दिन थालेपछि प्रचण्ड सशंकित भएका हुन् । एकताको पक्षमा देखिएका बामदेव गौतम मौन बस्दा पनि प्रचण्डको मनमा चिसो पस्न थालेको छ ।
ओलीले एकता गरिहाल्यौ, त्यसपछि बहुमतको बलमा पेलौला भन्ने मानसिकता बोक्दा एकतामा समस्या आएको माओवादी नेताहरुको दावी छ । माओवादीका एक स्थायी समिति सदस्य भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष बाँडफाँड गर्ने सहमति लागू भएन । सहअध्यक्षमा जाने प्रस्ताव आयो । फेरि माधव नेपाललाई आश्वासन दिइएको छ । हामीले एमालेबाट कतिपटक धोका खानुपर्ने ? कति त्याग गर्नुपर्ने ? वचनको पक्का नभएसम्म एकता हुँदैन ।’
PREVIOUS POST Previous post: बाम एकता संयोजन समितिको बैठक जारि
NEXT POST Next post: काङ्ग्रेस नेता विश्वकर्माले भने:कांग्रेस अब सत्ता पक्ष संग मिल्नुको बिकल्प छैन ,
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते मंगलवार, बैशाख ४, २०७५ १२:०७
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस मंगलवार, बैशाख ४, २०७५ १२:०७
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण मंगलवार, बैशाख ४, २०७५ १२:०७
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी मंगलवार, बैशाख ४, २०७५ १२:०७
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? मंगलवार, बैशाख ४, २०७५ १२:०७